कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए लोकगायक लामिछाने – indepth.com.np
कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए लोकगायक लामिछाने
१४ पुष २०७५, शनिबार २०:४६
‘पिंढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर
मेरी आमा रुँदीहुन् मलाई सम्झेर’
यस लोकगीतका गायक बुद्धिकृष्ण लामिछाने शुक्रबार सबैलाई रुवाएर कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताएका छन् । वि.सं. २०१२ साल साउन १ गते भक्तपुरको साविक वागेश्वरी गाविस वडा ३ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका ७ वागेश्वरीमा उनको जन्म भएको थियो । ६४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार उनको घरमै निधन भएको हो ।
मधुमेहको उपचार गर्न ढिलाइ हुँदा आँखाको दृष्टिसमेत गुमाएका लोकगायक लामिछाने दुर्घटनामा परेर दुवै गोडा नचल्ने अवस्थामा पुगेका थिए । पछिल्लो समय उनलाई मृगौलाको समेत रोग देखापरेको थियो ।
बुबा टीकाराम र आमा ब्रह्मकुमारी लामिछानेका छोरा बुद्धिकृष्णले एकसयभन्दा बढी लोक गीत गाएका छन् । उनले २०३६ सालदेखि रेडियो नेपालमा गीत गाउन थालेका थिए । रेडियो नेपालमा गीत गाउँदै उनी त्यहींकै जागिरे भएका थिए ।
धेरैजसो आफ्नै संकलनका गीत गाउने उनको ‘घाँस काट्ने खुर्केर आयो जोवन हुर्केर कसलाई दिऊ यो जोवन’ सर्वाधिक लोकप्रिय भएको थियो । त्यस्तै ‘गाई त बाँध्ने बाटेको दाम्लो, बाखरी बाखरी बाखरी बाँध्ने डोरीले मैले के गर्नु’ पनि त्यत्तिकै चर्चित छ । लोकगायक लामिछानेले लोकगायिका कोमल ओलीसँग गाएको ‘तिम्रो र मेरो मायाको डोरो’ बोलको गीत पनि उत्तिकै चलेको गीत हो । उनले पार्वती कार्कीसँग ‘हल्ला चल्यो टोलटोल, भयो डामाडोल’ दोहोरी गीतसमेत गाएका थिए ।
उनका सबैजसो गीतले लोकजीवनका कथाव्यथा बोकेका छन् । त्यस्तै सर्वसाधारणले भोग्ने दैनिकीलाई समेत उनले गीतमा उतारेका छन् । घरको आर्थिक अवस्थाले घरका युवाहरु रोजगारीको लागि घरबाट टाढा जान्छन् । आर्थिक रुपले गरिबीको भूमरीमा परे पनि श्रम गर्न नेपालीहरु पछि नपर्ने उनका गीतहरुले सन्देश दिएका छन् । जस्तैः
खोले र सिस्नु खाए
हात र खुट्टा टेक्दैछु
भारी बोक्दैछु ।
यो गीतले घरपरिवारलाई छाडेर उनीहरुको खाना र नानाको लागि रोजगारी गर्न गएको सन्देश बोकेको छ । उनका अधिकांश गीतले लोकजीवनकै भाका बोकेको भक्तपुर सांगीतिक समाजका अध्यक्ष प्रवीण शाही बताउँछन् ।
उनले सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ लोकगायक लामिछानेलाई कुनै सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान नगरेको बताए । समाजले गएको वर्ष उनलाई नगद दस हजारसहित सम्मान गरेको उनले सुनाए ।
अध्यक्ष शाहीका अनुुसार लोकगायक लामिछानेको नयाँ घरमा बस्ने धोको भने पूरा हुन पाएन । २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले उनको पुख्र्याैली घर भत्काएको थियो । भूकम्पले घर भत्काएपछि उनको बास जस्ताले बारेको टहरामा भएको थियो । सोही टहरामा उनले आफ्नो प्राण त्याग गरे ।
उनको घर जाने बाटो उनकै नाममा होला ?
गएको साउन १ गते उनको ६४ औं जन्मदिन मनाउँदा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भक्तपुर–नगरकोट सडकबाट उनको घर पुग्ने सडकको नाम बुद्धिकृष्ण लामिछाने मार्ग राख्ने आश्वासन दिएका थिए । भक्तपुर सांगीतिक समाजको अगुवाइमा मनाएको उक्त जन्मदिनमा प्रमुख मिश्रले लोकगायक लामिछानेको सम्मानस्वरुप उनको परिवारलाई आवश्यकताअनुसार नपाले आर्थिक सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएका थिए । तर त्यसपछि मेयर मिश्र र नपाका कुनै प्रतिनिधि उनको घर नपुगेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
स्व. लामिछानेको शुक्रबार नै अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको छ । लोकगायक लामिछानेका दुई श्रीमती, पाँच छोरी र दुई छोरा छन् ।
एचआईभी कार्यक्रम तल्लो सरकारसम्म लान माग
इतिहास पढ्नेमात्रै होइन मनन पनि गर्न बाध्य पार्ने ‘रणहार’